Sinopec Vinyl acetate Monomer, polyvinyl utshwala, Methyl acetate - Haitung
MAYELANA HAITUNG CHEM
Strategic Partner of Sinopec ngoba Vinyl imikhiqizo acetate
imikhiqizo eziyinhloko zihlanganisa: Vinyl acetate Monomer (vam), polyvinyl Utshwala (PVA), væ emulsion futhi PVA fibre ect.
Sagxila esezingeni Petrochemicals
Besilokhu sigxile ucwaningo nentuthuko kanye ukusabalalisa eliphakeme amakhemikhali ikhwalithi petrochemicals.
Strategic Umlingane Osebenzelana Naye
Strategic Partner of Sinopec expecially ngoba Vinyl acetate imikhiqizo.
umphakeli professional Vinyl acetate Monomer (vam), polyvinyl Utshwala (PVA), EVA emulsion futhi PVA fibre Imikhiqizo.
Ixhomeke Sinopec ikhono namandla, izinze usinika imikhiqizo emazweni angaphezu kuka-60.
1.4 I-Butanediol (BDO)
Ukuphikelela modulus HIGH ...
Ucingo: +86 536 2746720
I-US VAM ifuna ukuthamba kuyaqhubeka enkundleni yokuthekelisa, i-invento ...
Imakethe yokuthekelisa ye-vinyl acetate monomer (VAM) yase-US iyaqhubeka nokubhekana nezidingo ezibuthakathaka ngezinto ezitholakala kalula, zengeza ingcindezi phakathi nezinyanga zasehlobo. Imvamisa, ukufunwa kwesizini kune-Q2 yokwakha ...
Amakhemikhali abhekene nokufuna ukushaqeka okufana nango-2008 njengoba i-coronavirus iya ...
Njengoba i-coronavirus iya emhlabeni wonke, izimakethe zamakhemikhali zingalindela ukushaqeka kwesidingo okufana nenkinga yezezimali yango-2008, lapho amathemba wokwehla kwamandla omnotho engxenyeni yokuqala yonyaka wezi-2020 eba maningi amathuba okuba khona. EYurophu, noma kunjalo ...
Ukuphazanyiswa kokuphazanyiswa kochungechunge lwe-coronavirus kuya ngokuya kuba kubi
Ukuphazanyiswa kokuthengwa kwempahla kusuka kokuchaphazeleka kokubhebhetheka kwe-coronavirus kuzodala ikhanda elikhulu kubakhiqizi bamakhemikhali ezinsukwini nasemasontweni azayo. Imibiko yabezindaba yokuvalwa okungenamkhawulo kweyodwa ...